Matipi mana ekurapa Kuzvimbirwa muVana | Bezzia
Matipi mana ekurapa Kuzvimbirwa muVana
Kuzvimbirwa idambudziko rakajairika rekugaya vana. Rangarira kuti ura hwako huchiri kukura uye zvakajairika, nekudaro, kuti nguva nenguva inounza dambudziko rakadai zvekuti haipedze kunwa zvinovaka muviri zvakasiyana kubva muchikafu zvakanaka. Chinhu chakajairika ndechekuti kuzvimbirwa uku kunogona kugadziriswa pasina matambudziko akawandisa uye konyangarika sekuuya kwayakaita.
Nekudaro, kana kuzvimbirwa kukapfuurira nekufamba kwenguva, zvakakosha kuti uone chiremba kuti uone kana uchitambura kubva kune chero rudzi rwehurwere. Ipapo isu tinopa rondedzero yemishonga kana matipi ayo anogona kubatsira mudiki kugadzirisa dambudziko rake rekugaya.
1 Wedzera yako fiber yekudya
2 Inwa mvura yakawanda
3 Ita mutambo
4 Kunwa zvigadzirwa zvemukaka zvakaviriswa
Wedzera yako fiber yekudya
Fibhi yakakosha uye yakakosha kana zvasvika pakudzivirira mwana kubva pakutambura kuzvimbirwa. Fibha haigone kushomeka mukudya kwemwana uye inofanirwa kutorwa nguva dzese nekudya kwese. Inowanikwa mune michero yakaita seapuro kana kiwi, mumiriwo kana zviyo. Kazhinji, kuva nechikafu chakapfuma mufibre kunobatsira matambudziko akasiyana ekuzvimbirwa kunyangarika.
Inwa mvura yakawanda
Chimwe chezvinhu zvakakosha kana zvasvika pakudzivirira mwana kutambura nekuzvimbirwa kunwa mvura zuva rese. Izvo zvakakosha kwazvo kuti mwana arambe akasimba zvakakwana nguva dzose uye usaratidze kushayikwa kwemvura. Iko kunwa kwemvura kunobatsira sosi kunyorova uye inogona kuenda panze pasina dambudziko. Chinwiwa chinokurudzirwa chinofanira kunge chiri mvura, kunwiwa kwezvinwiwa zvine shuga kana majuisi hazvikurudzirwe nekuti hazvipi chinhu chakanaka kumuviri.
Kugara uchirovedza muviri kunodzivirira kupatira. Chiitwa chemuviri chinobatsira fecal mass kuburukira mukati meura pasina dambudziko uye kudzinga chigaro nenzira inogutsa. Pamusoro peizvi, kudzidzira mitambo kwakakosha kuti mwana anzwe zvakanaka nezvake uye kudzivirira matambudziko eakawedzera kilos.
Kunwa zvigadzirwa zvemukaka zvakaviriswa
Zvimwe zvezvikonzero zvekudzvinyirirwa muvana zvinogona kunge zvichikonzerwa nekushaikwa kwemapurobioti mukati mekugaya system. Aya mabhakitiriya aripo muzvikafu zvakaviriswa uye anobatsira kutora zvinovaka muviri zvakasiyana zvinowanikwa mukati mekugaya.
Kazhinji, Kuzvimbirwa muvana kunogadziriswa nekutevera akateedzana matipi kana mishonga yechisikigo. Zvisinei, zvinogona kuitika kuti dambudziko rinoramba riripo zvisinei nekutevera kuraira kwakadai. Kana izvi zvikaitika, vabereki vanofanirwa kuenda kuna chiremba kunotsvaga chikonzero nei kupombwa kuchiramba kana kuramba uye kubva ipapo, ita nenzira yakakodzera kwazvo. Mumamiriro ezvinhu akadaro, mwana anogona kutambura neimwe mhando yehutachiona inomutadzisa kuve neyakajairwa ura yekufamba. Iri dambudziko rekugaya rinowanzo gadziriswa nekumisikidza mimwe mishonga inobatsira kuti kugaya kudya kuve kwakanaka. Zvikasadaro, mudiki anogona kuve nezvikamu zvekuzvimbirwa zvichienderera nezvose zvakashata izvo izvi zvinosanganisira padanho rehutano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Vanamai » Zvemwanakomana wako » Matipi mana ekurapa Kuzvimbirwa muVana
Isu tinobvunzurudza Zero Waste, chitoro chako chepamhepo chehupenyu husingaperi
5 marefu epamba zvirimwa zvekushongedza makona eimba yako